DIGITALIS: XULASHADA NOOCYADA UGU CAANSAN (SHARAXAAD IYO SAWIR) - DIGITALIS
Digitalis ama magaciisa luuqada Latinis (Digitalis), oo u tarjuma sida farta. Magaca dhirta la helay qaabka corolla, waxay u egtahay taako, tanina waxay ku baxday magaca Ruush - digitalis. Geedkani wuxuu ka tirsan yahay qoyska qorsheysan. Dunida waxaa jira 25 nooc oo dhir ah oo loo yaqaano nin. Germinates guud ahaan Yurub, Galbeedka Aasiya iyo Waqooyiga Afrika. Dhammaantood waxay ku midoobeen xaqiiqda ah inay ku jiraan digoxin, oo ka tirsan kooxda glycosides wadnaha.
Waa muhiim! Digoxin, inkasta oo ay si aad ah u waxtar u leedahay daaweyn la'aanta wadnaha, laakiin tiro badani waa sunta dhimashada!
Ka fikir noocyada ugu caamsan digitalis.
Dijitaalka (digitalis lutea)
Digitalis jaallaha - warshad dilka ah oo koraysa duurjoogta xajmiga iyo kaymaha ee koonfurta, galbeedka iyo bartamaha Yurub. Dhererka wuxuu gaari karaa 80-100 cm Dhaqdhaqaaqyo waa siman, siman, qumman. Caleemaha waa muddo dheer, waxay leeyihiin qaab baaxad leh. Burushka barafka ayaa koraaya afkoda, burush kasta waxaa lagu daboolaa hurdi, ubax huruud ah. Ubaxa waa yar yahay, in ka badan seddex sentimitir. Qaybo ka mid ah tijaabooyinka waxaa ku jira rusheeyo bunni ah. Xilliga jiilaalka ayaa si xawli ah u wareejinaya. Marka ay beerto foxglove jaalaha ah beerta jiilaalka adag, waxaa lagu talinayaa in la dhiso hoyga geedka. Bloomsiyada horaantii July iyo Blooms ilaa dhamaadka August.
Ma taqaanaa? Sababtoo ah muuqaalkiisa cajiibka ah, waxaa lagu ogaaday inuu bannaanka u qarnigii qarnigii XVI iyo weli waa quruxda wanaagsan iyo quruxda leh ee beerta.
Digitalis grandiflora - warshad gaaban ama biennial ah markii koray beeraha. Waxay ku koraan Western Europe, Asia iyo Siberia. Badanaa waxaa laga heli karaa cawska, dhulalka dhagaxa ah iyo qulqulka geedaha. Caleemaha waxay gaartaa dhererkoodu waa 120 cm, jiriduna waa siman yahay loona yareeyo, mararka qaar waa laamaha hoose. Caleemuhu waxay leeyihiin foomka qotada dheer, dhererka. Cabbirkoodu wuxuu kor u kiciyaa xagga sare ee wareegga. Ubaxa ku jira foxglove weyn-ubax weyn, dhererka dhererka 4-5 cm. Ubaxu wuxuu noqon karaa iftiin jaale ah oo hodan ah oo jilicsan oo leh rusheeyo bunni. Burushka oo ubaxa koraya waa xoogaa yar oo ka yar xajmiga marka loo eego noocyada kale, wuxuu gaaraa 20-25 cm. Noocyada noocan ah ee foxglove ee sanadka labaad ka dib markii laga beerto. In duurka, waxay kicisaa by is-isweydaarsiga, beeritaanka beerta waxaa ka wanaagsan inaad isticmaasho geedo koray in lagu koriyo oo lagu koriyo, kuwaas oo la beeray ka hor xilliga qaboobaha ama guga hore.
Waa muhiim! Midhaha dhammaan noocyada foxglove waa sanduuq shaki leh, sanduuq caleen ah oo dhererkoodu yahay 8-12 mm.
Foxglove Purle waa dhirta dilka ah, bannaanka u koraan sida laba sano jir ah, tan iyo sannaddii saddexaad waxay joojisaa in ubaxyada, lumiyo saamayn ku qurxinta, ama u dhinto si buuxda. La helay duurjoogta guud ee Yurub iyo Waqooyiga Afrika. Digitalis purpurea waxay gaartaa dhererkeedu yahay 150-200 cm, waxay ku koraan min 80-90 cm, oo ah ubaxyo badan oo ubax ah oo ubax ah oo dhejis ah oo gaaraya 6 cm muuqaalka inta lagu guda jiro ubax. Midabka tufaaxa ma aha oo kaliya guduud, wuxuu noqon karaa caddaan , casaan, miro iyo kareem. Sidoo kale, tufaaxa waxaa lagu jilicsanaa dhibco aad u fiican iyo dhibcood oo ah hooskii madow oo ka badan masaasiga laftiisa. Caleemaha waxay leeyihiin foomka lafdhabarta - 35-40 cm. Midabka caleemuhu way kala duwan yihiin cagaarka madow ee sare ee warshadda si aad u hooseeyso. Tani waxay sabab u tahay xaqiiqda ah in caleemaha digitalis denselys pubescent. Blooms in June iyo Blooms ku dhowaad dhammaan xagaaga.
Haddii aad ka saarto inflorescences qalajiyey, foxglove waxay samayn doontaa burushyada ubaxa cusub. Noocaan Tani waa mid ka mid ah ugu wax qabad la'aanta ah xaaladaha beerashada, waxay ku koraan ciidda ku dhowaad kasta oo leh share of chernozem, marka laga reebo carrada acidic. Waa abaar u adkaysta iyo jiilaalka u adkaysta, jecel yahay penumbra, laakiin waxay ku kobcin kartaa qorraxda, haddii qoyaan ku filan la hayo. Noocyada noocan ah ee foxglove ayaa ah kuwa ugu caansan ee beeraleyda oo leh noocyo badan: "carousel" - xayawaan caramel ah, "majirtaan cad" - xayawaan cad, "muuqaal weyn" - cadaan cad cad leh maqaarka cas, "lowska" - xayawaan qurux badan oo leh burgundy dhibco iyo tiro noocyo kale ah.
Digitalis yar-ubax (Digitalis parviflora)
Digitalis yaryar-ubax - warshad geedka dilaaga ah, ayaa markii hore lagu arkay gobollada buuraha ee Portugal iyo Spain. Foxglove aad u jilicsan, cilada marka la barbardhigo noocyada kale - dhererkoodu wuxuu yahay 40-60 cm oo keliya, asliga ah waa mid toosan oo siman, wuxuu leeyahay midab madow-guduud ah. Caleemaha foxglove yar-yar ayaa loo yareeyey cabbirka hoostiisa hoostiisa, oo leh qaab la jeexay, oo ah qaabka loo yaqaan "oorid", oo tilmaamaya dhamaadka. Joogitaanka Downy, oo qaawan on top. Ubax ka mid ah foxglove waa mid aad u yar, dhererkeedu wuxuu gaaraa 1-2 cm. Taabashadu waa mugdi madow ama guduud ah oo bunni ah oo midab leh madow. Cadayashada-duufaanku wuxuu gaarsiisan yahay dherer 10cm. Foxglove ee ubaxyada yar-ubaxyada ee July iyo Blooms ilaa dayrta. Noocan oo ah baraf u adkaysta, waxay u adkeysan kartaa heerkulka illaa -20 ° C. Nal-u baahan
Foxglove rusty ayaa ah warshad wakhti ah oo qorrax ah oo ku koraysa Koonfurta Yurub iyo Galbeedka Aasiyada, taasina waa foormo dheer - 150 cm. Maadada waa mid sahlan, isla'eg. Qaybta hoose waxay leedahay daboolka timaha, iyo daboolka sare ee maqan. Caleemaha hoose waxay gaari doonaan dherer 30 cm, waxay leeyihiin muuqaal aan caadi aheyn, qaabka lanceolate leh xididdada si qotodheer u ah, qandho joogta ah. Caleemaha sare ee foxglove waa kuwo fiiqan oo ciriiri ah, si habsami lehna u rogaya gaas. Ubax dhererka - illaa 4 cm, waxay yihiin kuwo badan oo isugu soo ururay inflorescences waaweyn. Burush-florescence waxay gaartaa dherer ah 50 cm.
Ma taqaanaa? Digitalis woolly iyo digitalis ballaaran-ubax - noocyada kaliya ee foxglove, kuwaas oo ku qoran Buugga Cas ee USSR. Hadda waxay ku jiraan ilaalin waddamada qaar CIS.
Ubaxa naftu way ka duwan yihiin noocyada kale oo isku midka ah ubaxyo orchid qaab. Midabka tufaaxu wuxuu noqon karaa midab huruud ah, midab jaalle ah, cagaar cagaaran oo leh caleemo madow ama midab leh. In ubaxyada noocyada this waxaa si cad u muujiyay dibinta hoose. Waxaa Bloomsiyo laga bilaabo Juun ilaa Agoosto, Blooms ee sanadka labaad ka dib markii abuur beereed. Waxay u dulqaadaneysaa xilliga qaboobaha.
Digitalis woolly - warshad daaqsiin ah oo dhirta ah, oo dhaqan ahaan isfuray laba sano. Kobaca Bariga Yurub iyo Galbeedka Aasiya. Gaar ahaan wuxuu ku koraa cawska, dhoobada dhoobada, kaymaha qoyan iyo xoortay. Foxglove waa mid dhexdhexaad ah waxaana la gaari karaa dhererkeedu yahay 100 cm. Dhaqdhaqaaqa dhirta waa mid toosan, qeybta hoose ee qaawan, iyo qoolleyaal badan oo ku yaal qeybta sare. Caleemaha hoose waa dhuuban, lanceolate iyo pubescent, 12 cm dheer Caleemaha sare waa miisaanka - u dhow u sare ee asliga ah, kuwa xoog badan ay u leexiyaan qaawan, wax yar ka yar pubescent. Ubaxyada waa weyn, ilaa 4 cm. Midabka tufaaxa waa jaale ama midab jaalle ah. Dibnaha hoose waa caddaan. Petals si muuqata loo ogaan karo. Burush-baalal-qabasho wuxuu leeyahay dherer ah ilaa 50 cm. Foxglove ayaa caleenta caanaha ku duugoobi doona bisha Luulyo iyo siddeedaad ilaa iyo dhamaadka bisha Agoosto. Wuxuu jecel yahay dhul furan oo iftiin leh. Uma dulqaadanayo dhaxan daran.